Charles Ramsey, Amanda Berry's Rescuer: Stockholm Syndrome rutere Cleveland [Video] - Ọnọdụ 2022
Charles Ramsey, Amanda Berry's Rescuer: Stockholm Syndrome rutere Cleveland [Video]
Akụkọ banyere ntọhapụ nke ụmụ nwanyị atọ a jichiri n’ụlọ ụmụnna ndị kataworo ahụ́ na Cleveland, Ohio, ejikọtawo n’otu echiche nke otu onye nnapụta ha na-atụghị anya ya bụ Charles Ramsey nwere (vidiyo dị n’okpuru ebe a).
Nkọwa ya banyere ma nnapụta ya na onye agbata obi ya yiri ka ọ na-adịghị emerụ ahụ na-atụnye ụtụ na foto nke ụmụ nwanyị na-arịa ọrịa Stockholm, "ihe na-akpaghị aka, ma eleghị anya na-amaghị ihe mmetụta mmetụta uche na ahụmahụ dị egwu nke ịbụ onye e merụrụ ahụ."
Na Mọnde, otu n'ime ụmụ nwanyị ahụ, Amanda Berry, kwụsịrị na, mgbe ọ nwetasịrị enyemaka Charles Ramsey ma gbaziri ekwentị ya, kpọrọ 9-1-1.
"Nwa agbọghọ a na-agbaba ụzọ na-eti mkpu," Ramsey gwara NBC ọdụ WKYC-TV. "Ya mere, m na-aga ebe ahụ … na m na-ekwu, 'Enwere m ike inye aka? Gịnị na-eme?' O wee sị, 'A tọọrọ m, anọwokwa m n'ụlọ a ogologo oge, achọrọ m ịla ugbu a.'
Na nyocha ha mere n'ụlọ ahụ, ndị uwe ojii hụkwara Gina DeJesus, 23, onye na-efu efu kemgbe afọ itoolu na Michelle Knight, 30, onye na-efu efu kemgbe afọ 11.
Ndị uwe ojii kwuru na ejidela nwoke a na ụmụnne ya abụọ, ndị dị afọ 50 na 54. Ramsey, bụ onye bi n'ofe okporo ụzọ, gwara ndị nta akụkọ na ọ dịghị mgbe ọ na-eche na ihe ọ bụla adịghị mma.
Ramsey kwuru, "Mụ na nwoke a na-aṅụ mmanya mmanya. "Anyị na-eri ọgịrịga na ihe na-abụghị, gee egwu salsa, ị hụrụ ebe m si abịa? Ọ bụghị ihe ngosi na nwa agbọghọ ahụ nọ n'ụlọ ahụ, ma ọ bụ onye ọ bụla ọzọ nọ n'ebe ahụ megidere ọchịchọ ha."
"Ọ dịghị ihe na-akpali mmasị banyere ya - nke ọma, ruo taa," Ramsey kwukwara. Ma ọ bụ echiche a nke nwoke na-adị mfe, n'ezie onye na-adịghị eme ihe ike, na-atụnye ụtụ na plausibility nke ọrịa Stockholm.
Ndị FBI na-ekwu na okwu ahụ bụ "Stockholm syndrome" bụ n'ihe gbasara ohi a na-ezu ohi na 1973 nke Kreditbanken na Stockholm, Sweden, bụ nke ndị ohi abụọ jichiri ndị ọrụ ụlọ akụ anọ site n'August 23 ruo 28. N'ime oge a a dọọrọ n'agha, ndị ahụ tara akpụ na-ekerịta ụlọ na ndị na-ejide ha. n'oge na-adịghị anya nwere mmetụta mmetụta uche; mgbe ahụhụ ahụ gwụchara, ha gbachiteere ha.
Otu akụkọ dị na Arch Kriminol, akwụkwọ akụkọ German na-ewepụta oge maka nyocha gbasara mpụ, na-akọwa ọrịa Stokholm dị ka ọ na-emetụta njide na onye njide, na-eje ozi iji jikọta ha abụọ, bụrụ ndị ihe metụtara gburugburu nnọchibido, megide ndị si mba ọzọ. "Nke a dị mma nke mmetụta uche nkekọ n'etiti aja na isiokwu bụ a agbachitere usoro nke ego n'okpuru nrụgide. Stockholm Syndrome nwere ike ịzọpụta ndụ nke aja na isiokwu n'otu aka ahụ, dị ka ọ na-ebelata isiokwu ọchịchọ ime ihe ike na otú o kwere omume mkpa maka a ọdịdọ site. ndị ọrụ nchekwa."
Ọ bụ ezie na echiche dịgasị iche iche, ndị ọkà mmụta mpụ na ndị ọkà n'akparamàgwà mmadụ kwenyere n'ọnọdụ ndị dị mkpa ka ọ mee.
Onye ejidere na-atachi obi n'ebe ndị mmadụ nọ ma dabere n'echiche onye njide. Iji mee ka ha dabere, ndị na-eme mpụ na-edobe ozi gbasara nzaghachi mba ọzọ n'aka ndị a dọọrọ n'agha.
Onye njide na-eyi egwu igbu onye ahụ a dọọrọ n'agha, yabụ onye a dọọrọ n'agha na-ekpe ikpe na ọ ga-aka mma irube isi n'ihe onye ahụ dọọrọ n'agha kama iguzogide ma gbuo ya.
Onye a dọọrọ n'agha enweghị ike ịgbanarị ma dabere na onye jidere ya maka ndụ ya. Onye njide na-aghọ onye na-ahụ maka mkpa ndị bụ isi nke onye a dọọrọ n'agha maka nlanarị na ndụ onye ahụ a dọọrọ n'agha.
N'ikpeazụ, ọnọdụ ahụ agaghị amalite ọ gwụla ma onye ahụ ejidere ya gosipụtara obiọma n'ebe onye ejidere nọ. Ndị a dọọrọ n'agha na-akọwakarị enweghị mmegbu dị ka obiọma; n'ihi ekele maka ịdị mma nke a, ndị a tara ahụhụ ga-ewepụ iwe ha wee tinye uche na "akụkụ dị mma" nke ndị njide iji chebe onwe ha.
Profaịlụ uche dị iche iche nke ndị sonyere na akụkọ ọjọọ a na-etolite ugbu a. Berry kọwara onye nwe ụlọ ahụ, ebe ejidere ya, dị ka Ariel Castrol, onye ọkwọ ụgbọ ala Cleveland dị afọ 52. Onye na-ere ahịa Cleveland Plain kọrọ na ejidere Castro maka ime ihe ike n'ụlọ na 1993 mana nnukwu ndị juri jụrụ ebubo ya. O doro anya na n'afọ 2004, Castro, bụ́ onye nta akụkọ n'oge ahụ, dere otu akụkọ na Plain Press banyere ịtọrọ DeJesus.
Kedu ihe bụ Stevens-Johnson Syndrome? Akpụkpọ ahụ Nwanyị Georgia na-agbaze ka ọ nwetasịrị ọgwụ na-ezighi ezi
Otu nwanyị nọ na Georgia na-etolite ọrịa Stevens-Johnson mgbe njehie ọgwụ na-eme ọgwụ na-ahapụ ya ka ọ gbazee ihu
Obere ọrịa 'Resignation Syndrome' na-eme ka ụmụaka gbara ọsọ ndụ na Sweden hapụ uche ha ibi
Ihe ị chọrọ ịma gbasara ọrịa arụkwaghịm, ọrịa a na-ahụ naanị na Sweden
Kedu ihe bụ Leaky Gut Syndrome? Eziokwu Na ọnọdụ a na otu esi edozi ya
Ihe ị kwesịrị ịma gbasara ọnọdụ a yana otu esi agwọ ya
Kedu ihe bụ Cat Eye Syndrome? Caitlin Stickels, Ihe Nlereanya nwere ọrịa mkpụrụ ndụ ihe nketa na-adịghị ahụkebe, ihe na-eme na foto nke magazin
Caitlin Stickels, ụdị “cat eye syndrome”, gosipụtara ịma mma ya maka Magazin V iji kwalite mmata maka ọrịa mkpụrụ ndụ ihe nketa na-adịghị ahụkebe
Nwa nwanyị Bangladesh nwere ike ịnwe 'Tree Man Syndrome
A na-enyo Sahana Khatun, nwa agbọghọ dị afọ 10 na Bangladesh, bụ nwanyị mbụ nwere ọrịa “nwoke osisi” n'ụwa